နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့် တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီး? - Yangon Media Group
နေပြည်တော်၊ မေ ၉ – နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင် ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Zhao Kezhi ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို မေ ၉ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတအိမ်တော် သံတမန်ဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် ဆွေမျိုးပေါက် ဖော်ဆက်ဆံရေးမှတစ်ဆင့် ဘက် စုံမဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မိတ်ဖက်ဆက်ဆံ ရေး၊ နယ်စပ်ဒေသများလုံခြုံရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေး၊ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ် ရေး၊ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ရဲအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာများ ကူညီထောက်ပံ့ပေးရေး၊ ရဲကွပ်ကဲမှုဗဟိုဌာနတည်ထောင်နိုင်ရေး၊ တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြန် နှင့် ကျောက်ဖြူစီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေး နွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ နှင့်အတူ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေ၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမင်းသူနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြ ပြီး ဧည့်သည်တော် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ဝင် ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဦး ဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ် နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး မစ္စတာဟုန် လျန်လည်း တက်ရောက်သည်။
တိုက်ခန်းရောင်းရန် အခြေအနေမရှိသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ငွေချေးမပေးဟု ဆို